Fifandraisana Libra sy Sagittarius: Fisakaizana, fitiavana ary firaisana - Famantarana Zodiac
Hevitry Ny Fandikana Nofy
Fifandraisana Libra sy Sagittarius: Fisakaizana, fitiavana ary firaisana
Mahatalanjona ny mifanentana Libra sy Sagittarius! Ny ankolafy roa amin'ity pairing ity dia mahira-tsaina, mifankatia ary mikatsaka ny fifaliana amin'ny fiainana. Mahita fahafaham-po i Libra amin'ny alàlan'ny famoronana sy fitehirizana ny firindrana. Hitan'i Sagittarius ny hafaliana amin'ny asa mampidi-doza sy ny fitrandrahana isan-karazany.
Samy mpiresaka be i Sagittarius sy i Libra. Noho izany, ny resaka ifanaovan'izy ireo dia lakilen'ny fahombiazan'ny fifandraisan'izy ireo. Ny dinidinika ataon'izy ireo dia mety maharitra ora maro momba ny filozofia, ny fomba fijerin'ny fiainana ary ny lohahevitra holistic. Tsy afaka nanampy i Sagittarius fa tsy hianjera amin'ilay Libra mahafinaritra sy mahafinaritra. Samy tia mampiala voly sy mifanerasera amin'ny hafa. Ny fanandramana an'izao tontolo izao dia ao amin'ny lisitry ny siny roa ihany koa.
Ny mpivady Libra-Sagittarius dia hahita ny fifandraisan'izy ireo. Mora ny mifampiresaka amin'izy ireo. Ara-dalàna ity duo ity ny manamboatra fatorana akaiky amin'ny alàlan'ny fisakaizana. Làlana malamalama mankany amin'ny fitiavana avy any. Ny fanamby lehibe atrehin'izy ireo dia ny famaritana hoe iza no sefo isan'andro. Ny fifanajana dia mandeha lavitra amin'ny famahana ny olan'ny lohahevitra 'izay mandray fifandraisana'.
Lisitry ny atin'ny Libra sy Sagittarius
Fifandraisana Libra sy Sagittarius
Fitiavana Libra sy Sagittarius
Firaisana Libra sy Sagittarius
Fifandraisan'ny vehivavy Libra sy ny vehivavy Sagittarius
Fampifanarahana vehivavy Libra sy lehilahy Sagittarius
Libra sy Sagittarius Love Match Wrap-Up
Ny zavatra voalohany mahatonga ny lalaon'ny fitiavana Libra sy Sagittarius hifanaraka dia ny sainy. Samy manana lafiny ara-pahalalana mahery izy ireo ary tia mianatra. Manohy mianatra zava-baovao mandritra ny androm-piainany i Libra sy Sagittarius. Fantatr'izy ireo fa ny famahanana ny saina dia manan-danja toy ny famahanana ny vatana na ny fanahy. Rehefa lasa mpivady izy ireo dia mety hiara-manao fikarohana vaovao.
Ankoatry ny fitiavana mianatra, dia samy mankafy puzzles teny. Libra sy Sagittarius dia toy ny piozila, ankamantatra ary lalao tsy misy dikany. Izay rehetra manohitra ny saina dia misokatra amin'ny fikarohana. Libra sy Sagittarius dia tia miresaka momba ny lohahevitra rehetra.
Tsy misy mahasamihafa azy raha fitiavana na politika, resaka fifampiresahana na fifosana isan'andro. Libra sy Sagittarius dia mampiasa firesahana amin'ny fahalalana momba ny tsirairay sy izao tontolo izao. Ity duo ity aza dia mahita zavatra manintona amin'ny fifampiresahana.
Tsy maika ny hanolo-tena i Libra sy Sagittarius. Tsy mampaninona azy ireo ny miaraka fa tsy mametraka marika amin'ny fifandraisana. Ity mpivady ity dia afaka mijanona ho mpinamana mandritra ny firaisana ara-nofo. Afa-po ihany koa izy ireo amin'ny maha mpivady tokana nefa tsy mila manambady.
Fantatry ny andaniny sy ny ankilany ny tsy fivadihan'izy ireo. Misy ny fifampitokisana lalina na dia tsy misy taratasy fanamarinana ara-panambadiana mampamatotra azy ireo aza. Tsy midika izany fa tsy hanambady mihitsy izy ireo. Midika izany fa tsy maika ny hanao izany ny mpivady.
Sagittarius dia tsy mety amin'ny fitafiany. Fantatr'izy ireo fa zava-dehibe ny fanaovana fahatsapana tsara. Io no zavatra voalohany tsikaritr'i Libra momba azy ireo sy ny antony mahasarika an'i Sagittarius. Tian'i Libra ny fomba fitafin'ny Sagittarius, ny fisehoany, ny fisainany, ny firesahany ary ny fihetsiny. Libra dia miavaka amin'ny hoe iza no ifaneraserany ary manana ny rafitra naoty manokana. Fomba entina mamorona vaovao ahazoana misafidy izay avelany amin'ny fiainany izany. Rehefa mihaona amin'i Sagittarius i Libra dia manamarina ireo toetra ilaina ao amin'ny lisitra 'tsy maintsy ananana'. Sagittarius tsy manana olana amin'ny famadihana ny lohan'i Libra sy hahazoana ny sain'izy ireo.
Ny libra dia manintona, be fitiavana ary manome. Izy ireo dia tia an'i Sagittarius, izay mahatonga azy ireo hahatsapa ho ao an-trano. Sagittarius tsy mahatsapa ny filana manaitra ara-dalàna. Saingy misy zavatra momba ny famelana azy ireo libra mila ny fankatoavany. Na dia mifantina aza i Libra dia raisin'izy ireo amin'ny tànana malalaka i Sagittarius. Ny faneken'izy ireo dia mikasika ny lafiny malefaka kokoa amin'i Sagittarius. Faly kokoa izy ireo mampiseho an'i Libra ny lafy tsaran'izy ireo koa.
Ny fifandraisana Libra sy Sagittarius dia manomboka toy ny angano tena izy. Mpivady falifaly ity duo ity, ary mizotra amin'ny lalan'ny olon-tiany izy ireo. Mifampitsiky izy ireo rehefa miroso amin'ny filentehan'ny masoandro. Mandritra izany rehetra izany dia manonofy ny sambatra mandrakizay izy ireo.
Ny fitiavana zarain'izy ireo dia mafana, mifanerasera ary mahery. Na dia milatsaka aza ny zava-misy dia mitoetra hatrany ny tanjaky ny fitiavana. Noho ny toetrany iraisana, ny fianjeran'ny zava-misy dia tsy henjana toa ny an'ny mpivady 'manonofy' hafa.
I Sagittarius dia latsaka ao amin'ny tranonkala fitiavana toy ny nofy izay manenona ny fitiavana Libra. Saingy, noho ny zava-misy dia manidina amin'ny tenany ihany izy ireo amin'ny farany. Sagittarius dia nibata ny tenany avy teo amoron'ny nofinofy maharitra mandrakizay.
Libra dia mbola manandrana mitazona an'i Sagittarius ho eo ambany fombany. Tompony amin'ny mahasarika, Libra mahalala izay holazaina hitazomana ny Sagittarius liana. Marina ity farany na dia tototry ny realista aza izy ireo. Sagittarius dia misambotra ny fon'i Libra amin'ny alàlan'ny tsy fitsarany na fanerena.
Ny erika Libra dia erotika sy mahatezitra. Tsy afaka manampy amin'ny maha-zavaboary ara-nofo azy ireo izy ireo. Izy io dia satria i Venus, ny planin'ny fitiavana, no misy ny hery mitaona ny planeta. Libra dia tsara tarehy ary mijery ny endrik'izy ireo, satria fantany fa mandeha lavitra amin'ny dihy manangoly izany. Ny tanjon'izy ireo dia ny hitaona ny mpiara-miasa aminy haingana sy haingana. Mila mamafa ny Sagittarius amin'ny tongony izy ireo.
Hisintona ny fijanonana rehetra i Libra. Tsy misy vato tavela tampoka satria manandrana manaitra an'i Sagittarius i Libra amin'ny hatsaran-tarehiny, ny bikany ary ny hatsarany. Ny dingana rehetra ataon'izy ireo rehefa mampiaraka dia ny mamela fahatsapana maharitra ao am-po sy ao an-tsain'i Sagittarius.
Hitan'i Sagittarius fa sarotra ny mitondra tena amin'ny daty voalohany! Ny hetsika fetsifetsy nataon'i Libra dia manamora ny fanirian'i Sagittarius te-hitsambikina hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny hazakazaka an-trano! Tsy maninona satria izy rehetra dia ampahany amin'ny 'dihy manintona' an'i Libra. Averin'izy ireo ny hatsaran-tarehy, manery an'i Sagittarius hanafana, avy eo avelany hangatsiatsiaka mandritra ny andro vitsivitsy alohan'ny handoavana! Vao mainka manintona ny fifandraisana ara-batana voalohany!
Rehefa mifandray amin'ny efitrano fatoriana i Libra sy Sagittarius, dia toy ny hoe niaraka foana izy ireo. Ny roa tonta dia misokatra amin'ny fanandramana. Ireo antoko amin'ny lalao fitiavana Libra sy Sagittarius dia tsy manana olana amin'ny fizarana faniriana. Mametraka ny fifampatokisana izy ireo toy ny hoe efa nisy teo amin'izy ireo foana. Libra dia mampiseho an'i Sagittarius fa ny fihetseham-po mahery vaika dia afaka mameno firaisana amin'ny firaisana. Ny fanirian'i Sagittarius hitrandraka dia mampianatra tetika vaovao Libra eo anelanelan'ny lambam-pandriana!
maninona no liana be ny leos
Zavatra tsara i Sagittarius no mahay mampiala voly olona iray. Satria mora loatra amin'ny zavatra hanelingelina an'i Libra izany rehetra izany. Tsy hoe leo ny Libra. Saingy, ny fahalianany voajanahary no mahatonga azy ireo hifindra amin'ny toerana mahaliana iray hafa. Sagittarius tsy manana olana amin'ny fitazonana azy ireo satria samy manadihady izy ireo.
Ny antoko roa amin'ity pairing ity dia manana ego marefo. Misy fiantraikany amin'ny fifanarahan'ny Libra sy Sagittarius izany. Libra sy Sagittarius dia mitaky fikapohana ego mitovy. Tsara ny tian'ny Libra doting amin'ny sakaizan'izy ireo. Raha mbola mahatsiaro ho malala i Sagittarius dia faly izy ireo mamerina ilay fiheverana. Ny fitazonana ny fifandanjana eo amin'izy ireo dia manampy amin'ny fihazonana ny lalan'ny fifandraisana.
Tsy mila miteny amin'i Libra velively i Sagittarius. Manolotra ny habetsaky ny fifandonana sy ny fanoloran-tena izy ireo nefa tsy mandresy ny olon-tiany. Libra dia mailaka ary miditra amin'ny fangatahan'ny mpiara-miasa Sagittarian. Sagittarius sy Libra dia mitovy amin'ny filana fizakan-tena. Fahatakarana miharihary eo amin'izy ireo. Miaraka amin'ny fahafaha-mahaleo tena, ny vady tsirairay dia samy manana ny lenta hitomboany manokana. Manalefaka ny raharaha izany ary mitazona ny zavatra tsy ho maizina eo anelanelany. Izy ireo dia miaraka sy mifanakalo hevitra momba ny zavatra niainany teo amin'izao tontolo izao.
Ny hany lesoka amin'ny fomba fifampiresahan'ny roa tonta dia ny fahafahan'izy ireo mihetsika na tsy miraharaha. Libra dia manana filokana maneso. Sagittarius dia matetika no maneso. Raha tsy manandrana dia mety mifandramatra ny roa tonta rehefa tsy mieritreritra alohan'ny hiteny.
Fifandonana Libra sy Sagittarius
Ny fifandraisana Libra sy Sagittarius dia manomboka amin'ny dazzle sy pizzazz be dia be. Miala vetivety ity angovo ity rehefa tonga tampoka amin'izy ireo ny tontolo tena izy. Tsara izany fa samy manana ny lafiny misy azy izy ireo, mamela azy ireo hanitsy ny fiovana haingana. Ny toetran'i Libra azo sary an-tsaina dia naniry mafy ny angano ela kokoa noho i Sagittarius izy ireo.
Rehefa mifankatia dia matetika misy mandanjalanja tsara manome sy mandray miaraka amin'ity fiaraha-miasa ity. Libra dia voajanahary amin'ny fanomezana satria tanjon'izy ireo tokana ny hampifaly ny mpiara-miasa aminy. Amin'ny alàlan'ny fahafinaretan'i Sagittarius, miaina fahafinaretana i Libra. Saingy, Sagittarius dia manana lafiny mahasarika ny tenany. Mety horaisin'izy ireo ho tsy misy dikany ny Libra. Rehefa manao izy ireo dia tsy mahay mandanjalanja ny fanomezana sy ny fitiavana. Raha tsy mivaly ny filàn'i Libra dia miala amin'ny Sagittarius izy ireo, maratra noho ny fandavana tsikaritra.
Libra dia olona iray miaina tsindraindray ary tena amin'izao fotoana izao. Indraindray, toa i Sagittarius no lohany ao anaty sery. Toy ny hoe manana tongotra iray eo am-baravarana sy lohany foana izy ireo amin'ny ho avy. Sagittarius dia mila mitandrina kokoa mba hitazomana hatrany ny filan'i Libra.
Misy fifandonana voajanahary eo amin'ny nentim-paharazana sy ny maoderina amin'ity pairing ity ihany koa. Tian'ny Libra ny mifandanja amin'ny zavatra rehetra. Midika izany fa mandray zavatra tsikelikely amin'ny fomba milamina. Zava-dehibe amin'izy ireo ny mahazatra. Sagittarius dia mandika ny lalàna rehetra amin'ny fitandremana ny fivoriambe. Tian'izy ireo ny miala amin'ny 'dingana tsy ilaina' mba hahatratrarana ny vokatra haingana kokoa.
Libra sy Sagittarius Polarity
Amin'ny fanandroana, ny famantarana rehetra dia mifanaraka amin'ny polarity. Ny herin'i Yin sy Yang no polarity resahina. Ireo hery ireo dia mitaona ireo teraka teo ambanin'ny famantarana zodiaka manokana. Ny fifandanjan'ireto hery ireto ao anaty fifandraisana dia mampisy fahasamihafana eo amin'ny fomba fiarahan'ny olona. Noho izany, ny polarities dia misy fiantraikany amin'ny fifandraisan'ny Libra sy Sagittarius.
Vehivavy i Yin. Yang no angovo mifanohitra ary masculine. Ireo andinin-tsoratra masina dia tsy mifandraika amin'ny lahy sy ny vavy fa manampy amin'ny famaritana ny hery mahery. Yin dia miombom-pihetseham-po, manam-pahaizana ary mandefitra. Yin dia manohana, mora tohina ary mamaly. Yang dia mivantana, masiaka ary mandroso. Rehefa mandanjalanja i Yin sy i Yang, dia hery mifameno izy ireo.
Yin dia mifanaraka amin'ny mariky ny Libra. Yang dia mifanaraka amin'ny mariky ny Sagittarius. Efa nisy sahady ny firindrana voajanahary amin'ny raharaha Libra sy Sagittarius. Saingy, raha tsy mahay mandanjalanja ireo polarity ireo dia midika izany fa mihasimba izy ireo. Ny polarisan'ny polaritra dia misy fiantraikany amin'ny fitondran-tena voajanaharin'i Libra sy Sagittarius.
Rehefa mibolisatra i Yin, ny Libra dia mahery setra, mihidy ary manao sorona. Raha polarize i Yang, dia mahatonga an'i Sagittarius hihozongozona, ho tia ady ary ho mahery setra. Ny miverina amin'ny toe-javatra mahay mandanjalanja dia midika hoe miverina amin'ny firindrana. Ny antoko miaina ny vokatry ny polarization dia mila mandray ny hery mpanohitra. Mila miezaka ny Libra mba ho mora mandray sy hahatsapa kokoa ny Sagittarius. Sagittarius dia mila mihamafy kokoa, tsy dia mahery setra ary mandefitra kokoa.
leo lehilahy sy vehivavy libra eo am-pandriana
Lafiny Libra sy Sagittarius
Amin'ny fanandroana, ny lafiny dia manampy amin'ny famaritana ny fifanarahan'ny fifandraisana. Ny lafiny dia fandrefesana ny elanelana misy eo amin'ireo famantarana zodiak. Miaraka amin'ny lalao fitiavana Libra sy Sagittarius, famantarana ireo dia famantarana zodiaka telo. Izy io dia mamorona lafin-javatra fantatra amin'ny anarana hoe kianja.
Ny sarin'ny kianja dia manazava ny fahasamihafana misy eo amin'izy ireo. Ny lafiny efatra dia misy lafiny efatra ka i Libra sy i Sagittarius dia miombon-kevitra ary mivory amin'ny teboka sasany, saingy tsy izy rehetra. Indraindray, toa mandeha amin'ny lalana roa samy hafa izy ireo, fa tsy hahita mifanatri-maso mihitsy.
Ity pairing ity dia manatevin-daharana ary mifampianatra. Miaraka amin'ny fifantohana amin'ireo toetra matanjaka entin'izy ireo eo amin'ny latabatra dia misy fahombiazana amin'ny fitiavana. Ny lalao Libra-Sagittarius dia mamela ny fikarohana ireo ratra ara-pihetseham-po taloha ho an'ny fanasitranana. Ireo fanahy mahaleo tena roa ireo dia mifanampy amin'ny fitomboany.
Ny fahasamihafana misy eo amin'izy ireo dia tsy inona fa ny quirks na idiosyncrasies. Ny mahasamihafa azy ireo dia manintona azy ireo ihany koa. Libra sy Sagittarius dia afaka manao fitiavana rehefa manam-paharetana sy mahatakatra izy ireo. Mipoitra ny olana raha misy ny tsy fahampian'ny fandeferana.
Element Era Libra sy Sagittarius
Ny famantarana ny zodiaka rehetra dia mifanaraka amin'ny iray amin'ireo singa efatra: Tany, Afo, Rivotra, na Rano. Libra dia mifanaraka amin'ny singa eto an-tany. Sagittarius dia mifanaraka amin'ny singa Fire. Efa misy ny fanoherana ny singa fototra. Izy io dia mitaona fitaomana manaitra ny fifandraisana Libra sy Sagittarius.
Libra dia miorim-paka, azo ampiharina ary manan-tsaina. Izy ireo dia metodolojika ary mila filaminana amin'ny fifandraisana. Sagittarius dia malaso, sahisahy ary masiaka. Mila aingam-panahy mitohy izy ireo mba hahaliana azy ireo amin'ny fiarahana iray. Ny tany dia afaka manohana afo amin'ny alàlan'ny fanomezana azy io ho may handoro mandrakizay. Saingy, afaka mamono ny afo ihany koa izy io raha lasa mavesatra loatra ny fitaomana.
Mila mitandrina i Libra mba tsy ho lasa clingy loatra amin'ny Sagittarius voan'ny afo. Izy io dia mety hiteraka famelezana valiny izay tsy hahafa-po ny Sagittarius. Na, mety hiteraka fihazakazahana amin'ny lalana mifanohitra amin'ny Sagittarius. Mahatonga ny afon'ny firehetam-po ho faty io.
Raha Libra dia tokantrano iray noho ny toetran'izy ireo, Sagittarius dia an'izao tontolo izao. Sarotra ho azy roa lahy indraindray ny mandahatra fotoana miaraka. Ny tsara indrindra dia raha samy manome fotoana hifanomanana ny fitsangatsanganana iarahana. Ny roa tonta dia mila 'manao lisitra' tadiavin'izy ireo handresy. Tsy maintsy mifandimby manamarina ny lisitr'izy ireo izy ireo raha milalao ara-drariny.
Sagittarius mety tsy mifanaraka amin'ny Libra. Fa maninona Satria i Libra dia mila manana olona manolotra faharetana. Ny Libra dia mety hiorina mafy amin'ny Sagittarius izay mila fahalalahana taonina mba hahasambatra. Ity fifandraisan'ny fitiavana ity dia mitaky scenario manome sy fandraisana tsy tapaka. Io ihany no fomba hitazomana ny olona rehetra ho afa-po.
Ny fifandraisan'ny Libra sy Sagittarius dia miankina amin'ny fahavononan'ireo mpiara-miasa hiara-miasa. Ny lehilahy Libra dia loholona, ​​azo ampiharina ary manan-tsaina. Izy io dia ny fitaoman'ny singa eto an-tany mahatonga azy hanana fotodrafitrasa. Vehivavy Sagittarius mahita azy fitiavana, be fitiavana ary manome. Raha ny marina, ny Libra Man dia manandrana mampifaly an'i Sagittarius mandrakizay.
Hatramin'ny daty voalohany, ny Libra Man dia manandrana manintona sy manaitra ny Vehivavy Sagittarius. Libra dia manomana ny daty voalohany hatramin'ny antsipiriany kely indrindra. Izy dia mpandany vola be ary manipy fitandremana amin'ny rivotra. Ilay Lehilahy Libra izay tsy mitsitsy vola amin'ny fitondrana Sagittarius hivoaka ny tanàna.
Fotoana vitsy alohan'ny hianjadian'ny vavy Sagittarius ho an'ny firavoravoan'ny lehilahy Libra. Manomboka amin'ny minitra nifampiresahan'izy ireo dia resy ny lalao fitiavana Libra sy Sagittarius. Miresaka mandritra ny ora maro momba ny zavatra rehetra sy ny zavatra rehetra izy ireo. Taorian'ny daty faharoa na fahatelo, ny resak'izy ireo dia tena ampahany amin'ny foreplay. Libra sy Sagittarius koa dia misy resaka ondana betsaka rehefa mivadika firaisana ny zavatra.
Ny Vehivavy Sagittarius dia an'izao tontolo izao. Nandehandeha be izy ary tiany ny fomba hahitan'ny Libra azy na inona na inona resahan'izy ireo. Ilay lehilahy Libra dia mihantona amin'ny teny rehetra aminy, mifikitra aminy am-pitiavana sy am-pitiavana.
Rehefa milamina ny zava-misy ary manjavona ny toetran'ny nofy tamin'ny daty voalohany dia manomboka ny asa. Ny lehilahy Libra dia mbola an-tsaina, noho izany dia miavaka foana ny fitsangantsanganana. Saingy, ny fifandraisana isan'andro eo amin'ny Libra sy Sagittarius dia mila fahatakarana. Tsy mifanaraka amin'ny zavatra rehetra izy ireo na dia mizara soatoavina mitovy amin'izany aza. Sagittarius dia sarotra kokoa ny mamoritra noho ny Libra. Eto dia mila mifandimby mankafy fiainana an-trano sy manao dia lavitra izy mivady.
Ny Sagittarius dia hendry, tsy nentin-drazana, ary mieritreritra mialoha. Ny lehilahy Libra dia ambany kokoa amin'ny tany sy mahazatra. Izy dia tia ny fitiavana ny vehivavy Sagitarianana mandritra ny fiainana. Hitany fa mahafatifaty sy be fitiavana ary tia olona izy. Mora ho azy ny fitiavana. Saingy, manantena izy fa hisy tsy fitoviana lehibe kokoa noho ny mahazatra azy. Mila fahaleovan-tena bebe kokoa noho ny vonona hanome azy i Libra. Tsy maintsy mihaona eo afovoany izy ireo mba hialana amin'ny fifamaliana.
mpinamana taurus lehilahy sy vehivavy homamiadana
Sagittarius dia mivantana, noho izany dia tsy manana olana amin'ny fanapaha-kevitra izy. Ny Libra Man dia miovaova ary afaka miverina amin'ny olana iray. Mety hahasosotra an'i Sagittarius izany raha mangataka andro amin'ny fanapahan-kevitra lehibe i Libra. Toa tsy mifanaraka amin'ny resaka vola ihany koa izy mirahalahy ireto. Ilay lehilahy Libra dia tia mandany. Ny Woman Sagittarius dia misisika ny hitahiry vola. Raha hendry i Libra, izy no hitarika an'i Sagittarius hiandraikitra ilay boky.
Ao amin'ny fifandraisana Libra sy Sagittarius, ny roa tonta dia manana fanantenana. Mety tsy hitovy ny fomba fijerin'izy ireo an'izao tontolo izao, saingy mampisy fofona ho an'ny pairing izany. Ny Sagittarius Man dia intuitive, ary toy izany koa ny Libra. Izy ireo dia afaka mametraka fifandraisana ara-tsaina eo amin'izy ireo. Io dia mamela ny zavatra hijanona ho takatra sy tsy tononina. Arakaraka ny faharetan'ity Duo ity no vao mainka mihamafy ny fifandraisana ara-tsaina.
Ny Lehilahy Sagittarius dia mahery, mahery ary masiaka. Ireo toetran'ireto farany dia mahaliana ny vehivavy Libra. Mitodika any amin'i Sagittarius Man izy hitana ny andraikitr'ilay mpiaro azy. Tsy manana olana i Sagittarius raha manao izany. Izy dia matanjaka, mahaleo tena ary mahay zavatra maro. Amin'ny maha-olon-tiana azy, mahery vaika amin'ny fihetsem-po izy, mamela ny fatorana lalina hiforona miaraka amin'i Libra.
Ny vehivavy Libra dia mianjera amin'ny lohany noho ny Sagittarius karismatika. Ny vehivavy libra dia manao izay rehetra azony atao mba hitadiavana azy. Tsy manana olana amin'ny fanehoam-pitiavana izy. Raha tsy mihoa-pefy anefa ny Vehivavy Libra, dia mitazona farafaharatsiny farafaharatsiny ho an'ny daholobe. Ny Sagittarius Man dia aleony toy izany.
Samy mahatsikaiky mahatsikaiky i Libra sy i Sagittarius Man-ny. Handany fotoana be dia be izy ireo hiresahana, hanihany, ary hanesoana. Ity duo ity dia tonga mankasitraka ny vazivazy vazivazy ananan'ny hafa. Io no fototry ny tsiambaratelo kely zarain'izy ireo. Io koa no fototry ny fifampatokisana mafy ifanaovan'izy ireo.
Miaraka amin'ny fitiavana, ny vehivavy Libra dia mila kokoa noho Sagittarius. Tiany ny miresaka mandritra ny ora maro ary lava koa ny foreplay. Rehefa vita ny asa, ary mamirapiratra izy ireo avy amin'ny fahasambarana aorian'ny fanambadiana, mila bebe kokoa i Libra. Tian'izy ireo ny mikoropaka mandritra ny ora maro. Mahatsapa sotro mahafinaritra izy ary matory eo am-pelatanan'ny Sagittarius Man-ny. Saingy, azo inoana fa matory tsy an-kijanona ary tsy hiaraka amin'ny fifampiraharahana bebe kokoa amin'ny karazany rehetra! Izany dia mety hamela ilay Vehivavy Libra ho sosotra sy maratra ara-pientanam-po.
Raha mifamaly izy ireo dia mampihena ny anton'izany ny Libra sy Sagittarius. Samy mpiady marina izy ireo. Tsy misy te hiala amin'ny adihevitra. Ity duo ity dia mety hiafara amin'ny ady mandritra ny ora maro na maratra amin'ny fitsaboana mangina lava. Ny fomba tokana hiverenana amin'ny ady hevitra epik dia ny fiekenan'ny roa tonta ny asa ratsy nataony.
Lohahevitra iray hiady indrindra amin'izy ireo ny vola. Ny Libra Woman dia hiantsena mandra-pilatsaka. Ny Sagittarius Man dia hahazo migraine mieritreritra ny vola laniny. Tsy maintsy mizatra amin'ny vola kely izy. Ny Sagittarius Man dia tsy maintsy mianatra tsy mijery ny fandaniana kely tsy ilaina.
Ny hany zavatra hampijanona ny lalaon'ny fitiavana Libra sy Sagittarius amin'ny fahombiazana dia ny tsy fahampian'ny fandeferana. Rehefa mifankatia ity mpivady ity dia mitazona ny fifandraisana matanjaka hatrany ny iraisan'izy ireo. Ny faharetana dia mamela azy ireo hizaha ireo fahasamihafana kely misy eo amin'izy ireo. Ity duo ity dia tsy mitovy mihitsy amin'ny lafiny rehetra, fa izany no mahaliana ny fifandraisana. Mitazona an'i Libra sy Sagittarius hiverina bebe kokoa izany!
Manontany tena ve ianao raha manana fampifanarahana mitovy amin'izany ny fifandraisanareo? Inona no tena fantatrao momba ny vadinao? Manontany tena ianao hoe inona ny fandrika mety hatrehinao na azonao ialana amin'ny fitiavana? Avelao ny Astros Horoscope Daily hanampy anao hahita ny antony mifanentana amin'ny fifandraisanao!
Vakio rehetra momba ny famantarana Zodiac Sagittarius
Tsindrio raha hianaranao rehetra Toetoetra Sagittarius, toetrany ary toetrany !
Mitady fitiavana? Tsindrio raha hamaky rehetra Fifanarahana Sagittarius !
Makà fampahalalana lalina momba ny Sagittarius Lehilahy !
Mamaha ny zava-miafina ny Vehivavy Sagittarius !
Manana zanakavavy na zanakavavy sagittarius? Tsindrio raha hamaky ny momba ny Ankizy Sagittarius !
gemini lehilahy sy leo vehivavy tia fampifanarahana
planeta dwarf rehetra ao amin'ny rafitry ny masoandro
inona ny tandindon'ny rano